Daacish oo sheegatay masuuliyada weerar lagu qaaday Xaflad aroos ah. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSoomaliyaDaacish oo sheegatay masuuliyada weerar lagu qaaday Xaflad aroos ah.
August 19, 2019 marqaan Soomaliya, Wararka maanta 0
Kooxda IS qaybtooda dalka Afghanistan ayaa sheegtay masuuliyada qarax lala beegsaday aroos ka dhacayay magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 63 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ugu 183 kale.
Dadka ku dhaawcmay iyo kuwa ku dhintay arooskan la qarxiyay ayaa u badnaa bulshada loo yaqaano Hazara oo ka mid ah dadka shiicada ah.
Nasrat Rahimi oo ah afhayeen u hadlay Wasaarada Arimaha Gudaha ee dalkaasi ayaa war uu soo saaray ku xaqiijiyey tirada dadka uu galaaftay qaraxaas sidoo kalena sheegay in dumar iyo caruur ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay.